Archive du 06-sept-2021
Fifampikasokasohana be loatra Voan’ny Coronavirus ny Barea iray
Efa tonga any Dar Es Salaam Renivohitr’i Tanzanie hatry ny omaly alahady ny Barean’i Madagasikara izay hifanandrina amin’ny Taifas Stars ekipam-pirenena Tanzaniana rahampitso 07 septambra.
GUINÉE CONAKRY NAONGAN’NY MIARAMILA NY FILOHA ALPHA CONDÉ
Nosamborin’ny miaramila notarihin’ny Lieutnant Colonel Mamadi Doumbouya lehiben'ny GPS (Groupement des Forces Spéciales) andian-tafika manokana ao Guinée Conakry ny Filoha Alpha Condé
Vita iny ny fety aman-danonana nentiny fitondram-panjakana naneho ny zava-bitany, nampisehoana fa mahavita azy ny Filoha sy ny ekipany amin’ny tontolon’ny baolina kitra.
Fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana Hentitra ny fanarahamaso ataon’ny mpitandro filaminana
Nivoaka 03 septambra teo nandritra ny filan-kevitry ny Minisitra ny fahataperan'ny hamehana ara-pahasalamana manerana ny tanin'ny repoblika.
Nampitandrina i Dr Fidiniaina Randriatsarafara “Anaty vanim-potoana mampatanjaka ny pesta isika”
Voamarina fa tena pesta aretin-tratra mihitsy no mitranga any amin’ny Kaominina Miandrandra Distrikan’Arivonimamo, hoy ny Dr Dr Fidiniaina Randriatsarafara
Tapitra ny hamehana Hangotraka amin’izay ny fifanandrinana politika
Raha tsiahivina, in-tsivy nohavaozina isaky ny tapa-bolana teo nanomboka ny 20 martsa 2020, izay nisy fotoana somary niato.
Baolina kitra Malagasy Tsy misy vokatra tsara azo amin’ny fifandirana
Tena ahiana hanimba ny baolina kitra ity tsy fitovian-kevitra na tena ady mihitsy eo amin’ny samy tompon’andraikitra, mba tsy hilazana fa efa tena manimba sy mamotika ny kitra.
Andry Rajoelina “Kianja hiarovana ny voninahi-pirenena ity”
Tontosa ny sabotsy 4 septambra lasa teo ny fitokanana tamin’ny fomba manetriketrika ny Kianja Barea Mahamasina notarihin’ny Filoham-pirenena Andry Rajoalina.
Eliace Ralaiarimanana “Hita taratra hatrany ny maha DJ ny mpitarika”
Satria tokoa mantsy tokanana androany (TTF: ny sabotsy teo) ny Kianja Barea dia nofoanana eto amin'ny tany repoblikanina ny hamehana ara-pahasalamana
Antananarivo Atsimondrano Mampijaly ny mponina ny tohamboivoy lavareny
Maika amin’ilay tetikasa flyover ny ankamaroan’ireo mponina ao anatin’ny distrikan’Antananarivo Atsimondrano. Lohalaharana amin’ireny ny mponin’Itaosy sy Ampitatafika.
Tranga hafahafa Nodimandry ilay tovolahy namono biby
Tovolahy iray vao 18 taona monja no maty noho ny famonoana biby teny Ankaditoho Marohoho.Niaraka tamin'ny namany ity tovolahy ity nandritra izany.
Fihaonan’ny Barea sy Tanzania Hirariana ny hisian’ny fahagagana
Tontosa ihany moa iny ny voalaza hoe “fitokanana” ny Kianja Barea Mahamasina ny sabotsy teo. Tsy hitarina be ny resaka fa samy mahalala ny dikan’izany atao hoe fitokanana
Depioten’i Fandriana Manampatrampatra ao anaty tambazotran-tserasera
Mba hilazana azy amin’ilay fomba fiteny mahazatra antsika Malagasy hoe mahay vava dia hita ho mitohy manampatrampatra ao anaty tambazotran-tserasera hatrany ny depioten’I Fandriana,
Vehivavy miisa 2 avy any Antsirabe Tonga nangaro-paosy tao Ambositra
Vehivavy miisa 2 no tra-tehaky ny polisy monisipaly tao Ambositra ny tolakandron’ny sabotsy teo. Araka ny nambaran’izy ireo dia avy any Antsirabe
Olombelo Ricky Hitondra “Mozika ts’isy farany”
Etsy amin’ny Canal Olympia, Akoor digue, no fotoana miaraka amin’i Olombelo Ricky ny 25 septambra izao. Hitondra “Mozika ts’isy farany”,